८ बुँदे सहमति पछि डा. केसीले तोडे २८ औं दिनमा अनशन » Butwal News Update
८ बुँदे सहमति पछि डा. केसीले तोडे २८ औं दिनमा अनशन
October 11, 2020 October 11, 2020 बुटवल न्युज अपडेटLeaveaComment on ८ बुँदे सहमति पछि डा. केसीले तोडे २८ औं दिनमा अनशन
डा. गोविन्द केसीले १९ औं आमरण अनशन तोडेका छन् । शनिबार राति सरकारसँग ८ बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले २८ औं दिनमा अनशन अन्त्य गरेका हुन् । डा. केसीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सफाइ कर्मचारी विकास नेपालीको हातबाट जुस पिएर अनसन तोडेका हुन् । ४६ वर्षीय नेपाली कोरोना संक्रमण भएर निको भएका हुन् ।